ရုရှားနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် လမ်းကြောင်းများ ရှာဖွေနေသည်ဟု နေတိုးပြောကြား - Xinhua News Agency
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၄ ရက်က ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲလ်မြို့ရှိ နေတိုးဌာနချုပ်၌ ပြုလုပ်သည့် နေတိုးထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေသော နေတိုးအတွင်းရေးမှူးချုပ် Jens Stoltenberg အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘရပ်ဆဲလ် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံက မြောက်အတ္တလန္တိတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့(NATO) သို့စေလွှတ်ထားသော ၎င်း၏ သံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဆိုင်းငံ့ရန် နှင့် မော်စကိုမြို့ရှိ နေတိုးမဟာမိတ်ရုံးများအား ပိတ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားလင့်ကစား နေတိုးအနေဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် လမ်းကြောင်းများကို ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နေတိုး(NATO)အတွင်းရေးမှူးချုပ် Jens Stoltenberg က အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်သော နေတိုးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးပြီးနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်စဉ် Stoltenberg က “ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး နှင့် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုကို မြှင့်တင်ရာမရောက်သည့်” ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် နေတိုးဘက်က စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက နေတိုး၏ မူဝါဒသည် မယိမ်းမယိုင်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နှင့် NATO ရုရှားကောင်စီအပါအဝင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလအစောပိုင်းတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်စည်းမျဉ်းများကို ကျော်လွန်ပြုမူသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ရုရှားသံတမန် ၈ ဦးကို နေတိုးက နှင်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ နေတိုး နှင့် ရုရှားကြား ဆက်ဆံရေးသည် စစ်အေးခေတ်နောက်ပိုင်း ယခုအခါတွင် အနိုမ့်ဆုံးအမှတ်သို့ ရောက်ရှိနေခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နေတိုးမဟာမိတ်ဘက်က စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း Stoltenberg က ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်တို့အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အမှန်တကယ် ငြင်းပယ်လိုခြင်းမရှိပါဘူး ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအသာစီးယူခြင်းကိုသာ ငြင်းပယ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်တာပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချိန်ကာလတွေက ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ပါပဲ ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ အခုအခါ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရုရှားဟာ နေတိုးနဲ့ နီးကပ်စွာတည်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံး အိမ်နီးချင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ် ၊ သူတို့နဲ့ စကားမပြောနိုင်စရာ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာကြောင်းမှ မရှိပါဘူး ၊ ပြီးတော့ ဒါဟာခက်ခဲတယ်ဆိုတာကို ရုရှားက သဘောပေါက်နားလည်အောင် ပိုမိုကောင်မွန်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော တနင်္လာနေ့တွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ “ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မဆန်သည့်လုပ်ရပ်များ”အား လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် နေတိုးသို့ စေလွှတ်ထားသော ရုရှားအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ရပ်ဆိုင်းရန် ရုရှားနိုင်ငံဘက်က ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မော်စကိုမြို့ရှိ နေတိုးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းကြောင်း နှင့် မော်စကိုမြို့ရှိ နေတိုးသတင်းဆက်သွယ်ရေးရုံး၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပါ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ရုရှားဘက်က ကြေညာခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၆ ရက်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရက်ဆဲလ်မြို့ရှိ ရုရှားသံတမန် ၈ ဦးကို နှင်ထုတ်ကြောင်း နေတိုးဘက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုသူများသည် “ ထုတ်ဖော်ကြေညာထားခြင်းမရှိသော ရုရှားထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများ” ဟူ၍ နေတိုးဘက်က စွပ်စွဲထားသည်။
နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ယင်းသံတမန်မစ်ရှင်တွင် ရုရှားဝန်ထမ်းဦးရေကို ၂၀ ဦးမှ ၁၀ ဦးအထိ အရေအတွက် ထက်ဝက်တိတိလျှော့ချခဲ့သည်။
ယင်းမတိုင်မီက ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များတွင်လည်း နေတိုးက လက်တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဘရက်ဆဲလ်ရှိ ရုရှားသံတမန်အရေအတွက်ကို နှစ်ဆ လျှော့ချမှုပြုလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BRUSSELS, Oct. 20 (Xinhua) — Despite Russia’s decision to suspend its mission to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and to close the alliance’s offices in Moscow, NATO’s Secretary General Jens Stoltenberg said on Wednesday that it will continue seeking ways to engage with Russia.
Addressingapress conference ahead of the two-day meeting of NATO defense ministers, Stoltenberg said NATO regretted Russia’s decision “which does not promote dialogue and mutual understanding.”
He added that NATO’s policy remained consistent, and it remained “open to dialogue, including through the NATO Russia Council.”
Stoltenberg said the alliance regretted the fact that “the relationship between NATO and Russia is now at the lowest point since the end of the Cold War.”
“For us, that’s actually not an argument against dialogue, that’s an argument in favor of dialogue, because it is exactly when times are difficult, we have challenges and problems as we have now, that we need to sit down and talk,” he added.
“We will continue to work for dialogue because we believe that Russia, our biggest neighbor … being there close to NATO; there’s no way that we cannot talk to them and therefore we continue to strive forabetter relationship with Russia knowing that this is difficult,” he said.
On Monday, the Russian Foreign Ministry announced that Moscow decided to suspend the operation of the Russian Permanent Mission to NATO in retaliation for the alliance’s “unfriendly actions.” Russia is also suspending the activities of the NATO Military Liaison Mission in Moscow and terminating the work of the NATO Information Office there.
NATO announced the expulsion of eight members of the Russian mission in Brussels on Oct. 6, calling them “undeclared Russian intelligence officers.” Additionally, the number of Russian staff at the mission was reduced by half from 20 to 10.
Photo – NATO Secretary General Jens Stoltenberg attendsapress conference followingaNATO summit at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on June 14, 2021.